पुनः रोजगारीको लागि ‘सीबीटी’ परीक्षा आजबाट सुरु, करीब एक महिनासम्म चल्ने ! | जनदिशा
पुनः रोजगारीको लागि ‘सीबीटी’ परीक्षा आजबाट सुरु, करीब एक महिनासम्म चल्ने !
काठमाडौं, ८ भदौ । आज शुक्रबारबाट दक्षिण कोरियामा काम गरी फर्केका नेपालीहरुलाई पुनः रोजगारीको अवसर प्रदान गर्न दोस्रो चरणको कम्प्युटरमा आधारित भाषा परीक्षा (सीबीटी) सुरु हुँदैछ । सीबीटी परीक्षाका लागि इपीएस कोरिया शाखाले ३ हजार ३ सय ४ जना परीक्षार्थीको नामावली सार्वजनिक गरेको छ ।
कम्प्युटरमा आधारित विशेष भाषा परीक्षा पास गरेपछि पुनः चार वर्ष १० महिना कोरियामा काम गर्न जाने अवसर प्राप्त हुने शाखाले जनाएको छ । यो परीक्षा कम्प्युटरबाट परीक्षा भएकाले करीब एक महिनासम्म चल्नेछ ।
वैदेशिक रोजगार विभाग, इपिएस कोरिया शाखाका निर्देशक कृष्णप्रसाद खनालका अनुसार परीक्षाको सम्पूर्ण तयारी सम्पन्न भएको हो ।
Previous Previous post: ‘मेरी मामु’कन्सर्ट- हजारौं दर्शकहरु झुम्मिए, आयुबको इन्ट्री हुँदा सिट्टी र तालीको वर्षा
Next Next post: त्रिविको मनोमानीः दुई वर्ष अघि पास, अहिले फेल, विद्यार्थीको भविष्य अन्योल